Ogaden News Agency (ONA) – Daacish oo Dad Ku Xasuuqday Caasimada Afqaanistaan ee Kabul.
Daacish oo Dad Ku Xasuuqday Caasimada Afqaanistaan ee Kabul.
Posted by ONA Admin	/ August 26, 2017
Maleeshiyaadka Daacish ee Afghanistan ayaa weerar culus la beegsaday Masaajid ay ku cibaadeystaan dadka Shiicada ah oo ku yaal caasimada dalkaasi ee Kabul.
Ugu yaraan 20 qof ayaa hada la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaana la filayaa in tirada dhimashada ay sare u kacdo. Waxaa dhaawaca la sheegay inuu ka badan yahay 40 qof. Maleeshiyaadka ayaa duhurkii xiligii lagu jiray salaada Jimcaha gudaha u galay masaajidka Imam Zaman oo ku yaal xaafada Qala-Najara ee waqooyiga Kabul.
Kooxda weerarka fulisay ayaa markii hore ku bilaabay qarax masaajidka dhexdiisa ka dhacay, waxayna kadib halkaasi ka bilaabeen rasaas badan oo ay la beegsadeen shacabkii tukanayey oo aan hubeysneyn. Maleeshiyaadkan ayaa la sheegay in markii ay rasaasta ka dhamaatay ay mindiyo ku dileen dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay ku jireen haween iyo caruur.
Kooxdaasi ayaa difaac ka galay qeybta sare ee Masjidka oo ay haweenka ku tukadaan, isla markaana u diiday inay goobtaasi soo galaan ciidamada amaanka oo goobta soo gaaray intuu weerarka socday, balse ay ku qaadatay wakhti dheer inay gudaha u galaan Masaajidka.